FIVORIAN’NY FIRAISAMBE AFRIKANA : Feno tanteraka ny fandaharam-potoan’ny Filoha Andry Rajoelina
Nisokatra omaly ny fivoriambe faha-33 an’ny firaisambe Afrikana. Manatrika ity fivoriana ity avokoa ny Filoham-panjakana sy ny lehiben’ny governemanta ao amin’ny firaisambe Afrikana. 11 février 2020
Tonga nanatrika izany koa Filoham-pirenena Andry Rajoelina. Tao amin’ny foiben’ny firaisambe Afrikana, Adis Abeba, ny fivoriana no natao ary nanamarika izany ny famindram-pahefana teo amin’ny Filoha Ejiptiana, Abdel Fattah Al-Sissi sy ny Filohan’ny Afrika Atsimo Cyril Ramaphosa.
Ity farany indray araka izany no hitantana ny firaisambe Afrikana mandritra ny herintaona. Ny fampitsaharana ny fampiasana fitaovam-piadiana aty Afrika no lohahevitra nofidian’ny mpikambana mandritra ity taona ity. Izany no natao moa dia ho fisorohana ny disadisa tahaka izay nisy tany Libye sy ny ady ifanaovan’ny vondrona mpampihorohoro ao amin’ny faritr’i Sahel. Nodinihin’ny rehetra nandritra izao fihaonana izao koa ny fikatsahana fandriam-pahalemana maharitra aty Afrika.
Nihaona tamin’ny Praiminisitra Kanadiana
Feno tanteraka ny fandaharam-potoanan’ny Filoha Andry Rajoelina mandritra izao diany izao satria nifandimby nihaona taminy ireo Filoham-panjakana aty Afrika. Isan’izany ny Praiminisitra Kanadiana, Justin Trudeau. Tafahaona samy tanora ny roa tonta teto ary azo lazaina ho nitovy tanteraka ny tadin-dokanga. Ao anatin’izany, ohatra, ny fametrahana fampandrosoana maharitra amin’ny alalan’ny toekarena maitso izay efa nomen’ny Filoha Andry Rajoelina lanja amin’ny handrakofana ala an’i Madagasikara. Tsiahivina fa fihaonana voalohany teo amin’ny roa tonta izao natao izao fa mbola hisy koa ny fihaonana hanamafisana ny fiaraha-miasa indrindra eo amin’ny sehatry ny fampianarana sy ny fiarovana ny tontolo iainana.
Voaresaka nandritra ny fihaonana koa ny famatsiana herinaratra eto Madagasikara. Manana tanjaka lehibe i Kanada raha ity sehatra ity no asiana teny satria dia ny 81 isan-jaton’ny herinaratra vokarina any aminy dia azo avy amin’ny angovo azo havaozina avokoa. Afaka maka traikefa amin’izy ireo i Madagasikara ary efa ao anatin’ny fandaharan’asan’ny Filoha rahateo izany, araka ny velirano faharoa : “Herinaratra ho an’ny rehetra.” Fantatra koa, fa hanampy an’i Madagasikara amin’ny fampiroboroboana ny indostria hanatrarana ny fahaleovan-tena ara-tsakafo ry zareo Kanadiana.Hisy ny fananganana orinasa vaovao manerana ny Nosy ary kendrena amin’izany ny famoronana asa sy ny fampiakarana ny toe-karena Malagasy.
Ankoatra izay, ho mpiara-miasa ara-teknika amin’i Madagasikara hanohitra ny doro tanety sy ny fiovaovan’ny toetr’andro koa i Kanada. Hatreto ihany koa dia mbola ity firenena ity no voasokajy ho isan’ireo firenena mandray mpianatra Malagasy betsaka indrindra handrato fianarana any aminy. Hisy koa, araka izany, ny fiaraha-miasan’ny Oniversite Kanadiana sy ny Oniveriste aty Madagasikara hanatsarana ny sehatry ny fampianarana sy ny kalitaon’ny fikarohana.
Nankasitraka manokana ny Filoham-pirenena, Andry Rajoelina koa ity Praiminisitra Kanadiana ity tamin’ny finiavany hikatsaka mandrakariva ny fampandrosoana an’i Madagasikara ka nahavoahosotra azy ho tompon-daka amin’ny ady amin’ny hanoanana aty Afrika. Izao fihaonana izao no manamarika ny fiaraha-miasa matotra eo amin’i Madagasikara sy Kanada.